အဆိုတော် အေးချမ်းမေနဲ့မေတ္တာမျှနေကြောင်း အရိပ်အမြွက်ပြောပြလိုက်တဲ့ ဇွဲနိုင်ဝင်း – Cele Lover
အဆိုတော် အေးချမ်းမေနဲ့မေတ္တာမျှနေကြောင်း အရိပ်အမြွက်ပြောပြလိုက်တဲ့ ဇွဲနိုင်ဝင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ၊ အဆိုတော် ဇွဲနိုင်ဝင်းကိုတော့ အားလုံးသိကြမှာပါနော်။ သူကတော့ အခုထိ အိမ်ထောင်မပြုသေးဘဲ လူပျိုကြီးဘဝနဲ့ နေထိုင်နေတာပါနော်။ အရင်ကလောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများတွင် မပါဝင်ကြတော့ပေမယ့်လည်း ပရိသတ်များက အားပေးနေကြဆဲပါနော်။
သူကတော့ တစ်စစီကျိုးပဲ့နေတယ် သီချင်းကို သီဆိုခဲ့တဲ့ အဆိုတော် အေးချမ်းမေနဲ့ မေတ္တာမျှနေတာပါနော်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းတော့ မရှိသေးသော်လည်း တစ်ချို့ ပရိသတ်တွေကတော့ သိနေကြပါပြီနော်။ အေးချမ်းမေဟာ အခုလက်ရှိမှာတော့ ပြည်ပနိုင်ငံတွင် နေထိုင်နေတာပါနော်။
ဒါ့ကြောင့် သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ long distance relationship ဖြစ်နေတာပါနော်။ အေးချမ်းမေကတော့ ဇွဲနိုင်ဝင်းရဲ့မွေးနေ့ကိုတောင် အဝေးကနေ လက်ဆောင်လေးတွေ လှမ်းပို့ရင်း ရိုနေကြတာပါနော်။ မမနဲ့မောင်လေးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို မသိလိုက် မရှိရလေအောင် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
တစ္ခ်ိန္က ပရိသတ္ေတြၾကား အေတာ္ေလးကိုနာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ ေအးခ်မ္းေမနဲ႔ေမတၱာမွ်ေနေၾကာင္း အရိပ္အႁမြက္ေျပာျပလိုက္တဲ့ ဇြဲႏိုင္ဝင္း
ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ ၊ အဆိုေတာ္ ဇြဲႏိုင္ဝင္းကိုေတာ့ အားလုံးသိၾကမွာပါေနာ္။ သူကေတာ့ အခုထိ အိမ္ေထာင္မျပဳေသးဘဲ လူပ်ိဳႀကီးဘဝနဲ႔ ေနထိုင္ေနတာပါေနာ္။ အရင္ကေလာက္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ မပါဝင္ၾကေတာ့ေပမယ့္လည္း ပရိသတ္မ်ားက အားေပးေနၾကဆဲပါေနာ္။
သူကေတာ့ တစ္စစီက်ိဳးပဲ့ေနတယ္ သီခ်င္းကို သီဆိုခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ ေအးခ်မ္းေမနဲ႔ ေမတၱာမွ်ေနတာပါေနာ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းေတာ့ မရွိေသးေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ သိေနၾကပါၿပီေနာ္။ ေအးခ်မ္းေမဟာ အခုလက္ရွိမွာေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနတာပါေနာ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦးဟာ long distance relationship ျဖစ္ေနတာပါေနာ္။ ေအးခ်မ္းေမကေတာ့ ဇြဲႏိုင္ဝင္းရဲ႕ေမြးေန႔ကိုေတာင္ အေဝးကေန လက္ေဆာင္ေလးေတြ လွမ္းပို႔ရင္း ႐ိုေနၾကတာပါေနာ္။ မမနဲ႔ေမာင္ေလးရဲ႕ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို မသိလိုက္ မရွိရေလေအာင္ ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ….
Previous Article ကျူးရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေအတွက် အခြေခံစားသောက်ကုန်များ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူ
Next Article သားနဲ့သမီးကို တွေ့ချင်လို့ ငိုယိုပြီးတောင်းပန်ပေမယ့် တွေ့ခွင့်မရတဲ့အဖြစ်ကို ပြောပြလာတဲ့ ပြေတီဦးနဲ့အူဝဲတို့ရဲ့ရှေ့နေ